Maka: ezitshixwayo | Martech Zone
Lwesine, Disemba 24, 2020 Lwesine, Disemba 24, 2020 IConor Cawley
Njengokuba ukuvalwa kwemisebenzi kuyehla kwaye nabasebenzi abaninzi bebuyela e-ofisini, besinomdla wokuphanda imiceli mngeni abajamelene nayo amashishini amancinci ngenxa yobhubhane weCovid-19, into ebebesenza ngaphezulu kokutshixwa ukuphuhlisa ishishini labo, nakuphi na ukwenza okungaphezulu abakwenzileyo , Itekhnoloji abayisebenzisileyo ngeli xesha, kwaye zithini izicwangciso zabo nembonakalo yekamva. Iqela elikwiTech.co livavanye amashishini amancinci ali-100 malunga nendlela abalawule ngayo ngexesha lokutshixa. Iipesenti ezingama-80 ze
Ixesha elizayo lokuThengiswa kweB2B: Ukudibanisa ngaphakathi nangamaqela angaphandle
NgoMvulo, Agasti 10, 2020 NgoMvulo, Agasti 10, 2020 ULindsay Duran
Ubhubhane we-COVID-19 ususe iziphumo ezibi kwilizwe lonke le-B2B, mhlawumbi ngokubaluleke kakhulu kwindlela ezenzeka ngayo iintengiselwano. Ngokuqinisekileyo, impembelelo ekuthengweni kwabathengi ibinkulu, kodwa uthini malunga neshishini kwishishini? NgokweNgxelo ye-B2B ye-Shopper yeNgxelo ye-2020, iipesenti ezingama-20 zabathengi bathenga ngokuthe ngqo kwintengiso, behla ukusuka kuma-56% kunyaka ongaphambili. Ngokuqinisekileyo impembelelo yeShishini laseAmazon ibalulekile, ukanti iipesenti ezingama-45 zabaphenduli bophando baxele ukuba kuyathengwa